उहिल्यै स्कुले जीवनमा साँझ बिहान ओहोर दोहोर गर्ने गरेको देशी लाईन झिलिमिली छ । तर, हामीलाई चटपटे र आलुनिम्क्की बेचेर गुजारा चलाउने दारे भैया बेठेकान, उसको सम्झना बोकेर उसले ठेला बिसाउने गेट र सडक मात्र उस्तै छन् । त्यो बेला पैसा नभएर “एस एल सी” दिएर हिड्ने बेला उधारो खाएर नतिरेको पैसा आज भेटे त ब्याजको स्याज तिर्ने थिएँ । सडकका पेटी पेटी खुद्रा ब्यापार गरेर गुजारा चलाउनेहरुको ओइरो छ । वरिपरिका हरिया डाँडा पाखाहरुलाई, टाउको उठाएर हेर्ने सम्म फुर्सद छैन मान्छेलाई बरु उल्टै डाँडा पाखाले शहरको झिलिमिली नियालेर दिन काट्छन् । सिंगो देशि लाईनमा मेरो पालाको दोकान मात्र एउटा भेटेँ, पुरानो “अम्मर फोटो स्टुडियो”! उसले पनि समयको अगाडी घुँडा टेक्न जानिसकेको रहेछ । उहिल्यै जस्तो फोटोको रिल पानीमा चोबेर फरर्र….झुन्ड्याएर कहाँ सुकाउदो रहेछ र आजको समय ? बरु कम्प्युटरमा आधुनिक पाराको तार मोबाईलमा जोडेर नराम्रो मान्छेको फोटो पनि विश्व सुन्दरी जस्तै निकाली दिन पो थालेको रहेछ । मानौ अम्मर फोटो स्टुडियो साँच्चि नै अम्मर बनेको छ। धरान उपत्यकालाई सुम्सुमाएर उठ्ने ती वरिपरिका सुन्दर डाँडा र खोलाहरु लिम्बुवानको पुरानो ऐतिहाँसिक पानामा नयाँ बिकासका धर्साहरु कोर्दै परिबर्तित नयाँ लिम्बुवानको सम्भाबना उचालेर सदियौं देखि आफु हुनुको परिचय दीइरहेका छन् ।
बुढा सुब्बा बाजेले आफ्नो छेउछाउमा चुपचाप थुप्रै शहर बसाए पनि भताभुङ्गे राजाले चाँही आफ्नो दरबार अझै सम्हाल्न सकेको रहेनछ ! तल झर्दा कवि उपेन्द्र सुब्बाको भानु बाजे भानुचोकको धुलो खाँदै उस्तै उभिएको देखेँ । म उसैको छेउमा उभिएर पसिनाको कथा लेखिरहदा पनि सहानुभूति देखाएन, ऊ मुस्कुराई रह्यो लाग्यो उपेन्द्र सुब्बाले कट्टु बिनाको नाङ्ग्गो आकाश देखाएर झनझन लठ्याएछ उसैको उपद्रो कबिता सम्झेर हाँसिरह्यो । उसैलाई समातेर ऊ उभिएको फलामको रेलिङ्ग्मा खुट्टा राखेर पुस अप र हेभिङ्ग गर्ने हजारौं, लाखौँ युवाहरु लाहुर गएर उसकै आँखा अघि धरान शहर बद्लिसकेका छन् तर, ऊ उहि रामायण च्यापेर उभिएकोछ । कति टेम्पो, रिक्सा, साईकल र मोटर साईकल आएर ठोक्किए, कतिले उसैको धर्म संस्कार बिरुद्दमा नारा लाउदै पर्चा टाँसे, ढुंगाले हाने आगोले झोसे तै पनि उसले आफ्नो धर्म छाडेन, उभिरह्यो,जस्तो उभ्नु भनियो उस्तै उभिरह्यो, उभिएरै युगलाई अघि ठेलिरह्यो…..ठेलिरह्यो ।
भानू बाजेलाई त्यहिँ छाडेर म, मास्तिर घण्टा घर छेउ हुँदै सब्जी बजार तिर लागेँ । घाम चर्को थियो, झापामा नपाइने साइली साग र डल्ले खुर्सानी किनेर भारी बोकेंकी थिएँ । बेलायतले ठिर्याएको मेरो गहुगोरो निधार घामको ताप र रापले तताएर आरनमा पोलेर कुट्न तयार गरिएको फलामको पाता झैं रंन्किएको छ । एकजना बुढी आमा सकिनसकी कुम्ल्लो बोकेर मेरै अगाडी हात पसारेर चिया खाऊ लाग्यो नानि मलाई १० रुपयाँ दिनुस न ! हेर्दा मंगोलियन अनुहार परेको, हुन पनि लिम्बुवानको सुन्दर शहर धरानमा मंगोलियन अनुहार नै हुन्छन् नि होइन र ? पिरको चुली सिरमा उभ्याएर पहाड हुँदै तराई ओर्ले झै देखिन्थ्यो । ठ्याक्कै मेरो अनुमान भन्दा अलि पर निक्कै पर उसको जिउने आशाको सानो त्यान्द्रोले म बाट १० रुपैया पाउने ठाउमा अलि धेरै मागिरहेको थियो । जब मैले ब्याग छामेँ, खुशी अनुहारमा हिम नदि झै बगेको देखेँ । चुपचाप २ सय झिकेर दिएँ, २ सय पाएपछिको उनको खुशी हेर्न सकिन, यति सुनें….मेरो आयु पनि नानीलाई लागोस् । त्यो आशिर्वाद म लिन सक्दिनथें तेसैले उसलाई त्यहि छाडेर बाटो लागेँ ।
यो पालि समयको अभावले हो या मेरो आत्माले जाऊ ? नभनेर हो सदा झैँ मठ-मन्दिर धाइएन, बरु आफ्ना आफन्त भित्रका सबै बुजुर्गहरुलाई भेटेर सकेसम्मको दक्षिणा ( सेवा याङ्ग ) राख्दै ढोग्ने काम गरियो । आशिर्वाद टन्नै पाईयो सबैले भने अझ धेरै प्रगति उन्नति होस् । आज म सोचिरहेछु, म मन्दिर गएर घन्टी बजाई बजाई भेटि चढाउउदै मुर्तिलाई ढोग्दा पनि ढुंगाको मूर्तिले यतिका आशिर्वाद दिने थिएन सायद ! धरानमा रहनु हुने काका ससुरा साइला र कान्छा अनि नन्द साइली र कान्छीलाई भेटि राखेर हामी बाटो लाग्यौं । सबैले रोक्दै थिए, तर हतार भइएकोले बस्न मन लाग्दा लाग्दै पनि हिड्नु पर्दा सारै दुख लाग्यो । किन किन धरान मलाई आत्मिय लाग्छ जति बसेपनि मन आघाउदैन, बेलायतबाट हिड्दा साथीहरु संग घुम्न भेडेटार जान्छु, दार्जिलिंग जान्छु तर,अन्त्यमा म कतै नगई सारा सपना अधुरै मनभित्र गुम्साएर समयको पछि पछि दौडी रहेंथे
इटहरी पुग्दा दिनको १:३० बजेको थियो, उहिल्यै तरारा र इटहरी बिचमा खेतै खेत थियो । हरेक मंसिरमा त्यहाँ लटरम्मै धान झुलेको अझै आँखामा झल्झली छ तर अहिले त्यहाँ शहर छ ठुल्ठुला बिल्डिंग र उधोग अनि मिलहरु छन् । इटहरीको ब्यारेक अघि एकछिन रोक्कियौ । गीतकार तथा साहित्यकार गङ्गा राज मुकारुङ्ग जी संग भेट्नु थियो । उहा भर्खर ल्युटेन्न कर्नेल बाट फुल कर्नेल हुनु भएको थियो । २०४८ सालदेखि मैले गङ्गा जीलाई भेटेकी थिइन् । उहा त्यो बेला पाँचथर फिदिम मेरै बाबा भएको पल्टन श्री जंग गुल्ममा सेकेन्ड ल्युटिनेन हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला मलाई उहाँ गीतकार भन्ने थाहा थिएन । उहाँ इलामै शहर चियाबारी राम्रो भन्ने गीतको गीतकार हुनुहुन्छ । आफुलाई मन परेको सर्जक संग साक्षात्कार हुँन पाउँदा एक अर्कै किसिमको आनन्द लाग्यो । गंगा जी एकदम मिजासिलो, सालिन र सरल ब्यक्तिप्त्व लाग्यो । अग्रजहरु संगको भेटले जहिले उर्जा थप्ने गर्छ । गंगा जी संगको एकछिन भेटमा पनि मैले तेस्तै अनुभब गरें ।
इटहरी बाट हिडेको हामी २:२० तिर पथरी बजार पुगेका थियौं । बाईकमा कुददा कुद्ददा हैरान भएकोले एकछिन रोकेर २५ रुपैयामा एक बोतल पानी किनेर पिउदै ३ मुठा साइली साग ५० रुपैंया मुठाले किनेर बाटो लागेको हामी, बिर्तामोड पुग्दा ३:३० बजेको थियो । मेरो ज्याङ्ग्गो बलियो भाईको ज्याङ्ग्गो स्पिड्लाई नाई नास्ती नगरी पछाडी बसेर स्विकारेकोले चाँडो पुगेका थियौं बिर्तामोड । एकछिन बजारमा अल्मलिएर फेरि बुधबारे जेठा (तुम्बा ) बडा बाबुको तिर लाग्यौं । बडालाई नभेटेको धेरै भएको थियो ।
चार आली काटेर इलामको फेदमा रहेको सुन्दर मनमोहक बजार बुधबारे उकालो लाग्दा लाग्थ्यो, बिस्तारै साँझले आफ्नो घुम्टो उघारेर मास्तिरको डाँडा पहाडहरुलाई धमाधम छोपिरहेकोछ । कतै नरोकी आँखा चिम्लेर हुइक्याउदै हापेन चोक पुर्यायो भाईले । रमाईलो चिया बगान बिचमा कालो अलकत्रे बाटो । सानोमा हेरेको नेपाली चलचित्र सम्झनाको म तृप्ति कतै भुवन केसीलाई लुकेर भेट्न जाँदा जाँदै मेरो दाजु मुरलिधरले बाटैमा पक्रेर झापड हान्दै ल्याए जस्तो कल्पना गरें मैले । आनन्द लाग्यो, साँच्ची मेरो पनि मनको भुवन केसी यहिकहि छ कि जस्तो लाग्यो। कतै चिया बगानको बीचबाट “पिरती आफै हुँदो रहेछ” भनेर गित गाउदै निस्कने पो होकी भनि आँखा डुलाई रहेँ । तर त्यो सुन्दर बगानभित्र चियाका सुन्दर बुट्यान र कदमका अग्ला अग्ला रुख बाहेक केहि थिएन । निकै वर चिया बगान टुंगिने बेलामा सानो एउटा किराना पसल र छेउछाउमा केहि प्रहरी भाईहरु देखिन्थे तर ति सम्झना फ़िलमका पात्र थिएनन् ती त्यहीका साच्चिका प्रहरी थिए । तर, म कल्पनामै भएपनि धेरै रमाएँ, हुन पनि कल्पनामा जति यथार्थमा रमाउन नसकिँदो रहेछ। यो मेरो आफ्नै ठम्याई हो सबैको नहुन सक्छ । बिचरा मेरो भाई सकिनसकी थाकेँ पनि नभनी आफ्नो काखि बाट निस्किएको पसिनाको नमिठो गन्ध मलाई सुङ्घाउदै बाईक हाकिरहेको थियो । मोटाएर आफ्नो रुप डाल सन्नी देवल जस्तै बनाएकोले, चिया बगानको मेरो सुन्दर कल्पनामा उसलाई मुरलिधरको रुपमा भिलेन बनाएर उभ्याउन सकिन । बरु उसैले कुदाएको मोटर साईकलमा, उकालीमा पछिपछि ओरालीमा अघिअघि गुनगुनाउदै गएँ, बाटो पनि उस्तै थियो मेरो कल्पनाको कथा र गीतले मागे जस्तै उकालो ओरालो कहिँ कहिँ खाल्डो ।
तुम्बा ( बडा बाबु) निकै पाको हुनु भएछ तर, उहिल्यै जस्तो अझै डोको, नाम्ल्लो बुन्नु छाड्नु भएको रहेनछ। एउटा डोको सकेर बिट मार्दै हुनुहुन्थ्यो । आना माना नौनी घ्यु खाएर हुर्केको ज्यान सिस्नोको सुप पिएको आँखा अझ उस्तै तेजो रहेछ । तेसो म भन्दिन बडा आफैले भन्नु हुन्थ्यो हामीलाई । मलाई देखेर सारै खुशी हुनु भो । अनुहार, बडी आमाले मन पराउदाको जस्तो जुन जस्तो उज्यालो नभए पनि, कंचनजंघा जस्तो कन्चन रहेछ झ्वाट्ट हेर्दै तिनघरे जेठा भनेर चिनिने, लिम्बुवान भूमिले आफु लिम्बुवान हुनुको इतिहास सहित फक्ताङ्लुङ बोकेर अटल बसिरहे झैं बडा बाउको टाउकोले पनि ढाका टोपी ढल्काएर लिम्बु हुनुको परिचय दिईरहेको थियो । हामीलाई देख्ने बित्तिक्कै लिम्बु कुरामै बोल्नु पर्ने बडाको अर्को सुन्दर बिशेषता उहिल्यै देखिको अझैसम्म उस्तै रहेछ, मलाई देखेर भन्नु भो, कहिले आइस तँ मिक्फूला ? मिक्फूला भनेको लिम्बु भाषामा ( गोरा या खैरे ) म बेलायत बस्न थालेदेखि यहि नामले बोलाउनु हुन्छ । कति रमाईलो मेरो बडा बाऊ ! अहिले यहि कुभुलाको देशमा बसेर सम्झिरहेकी छु । कुभाकर्ण जस्तो चौडा र कडा छाती तराईको गर्मीले अलि खुकुलो युद्द रोकिएको मैदान जस्तै बनाएछ, त्यो वहाँले लगाईरहेको सानो गन्जि भित्रको थ्याल्थ्यालो छाती आफैले भनि रहेको थियो । मैले एकछिन आँखा झिमिक्क नगरी बडा बाऊको त्यो बेलाको मिलेको ज्यान र मेंछ्यायेम डाँडा जस्तो सेता सेता दन्तलहरहरु खोजिरहेँ तर, कतै भेटिन तल माथि गरेर गन्दा ओढार जस्तो मुखभित्र जम्मा ३ ओटा अन्धकारमा अल्मलिएको चमेरा जस्तो अप्ठ्यारो गरि झुन्डिरहेको देखेँ । सोचेँ कठै हामी गरिब नेपाली जनता बुढा पाकाको लागि सरकारले केहि निसुल्क नगरिदिने देशको जनता । नत्र बेलायतको बुढा बुढिः हरुले जस्तै मेरो बडाले पनि हस्पिटलबाट निसुल्क दाँत हालेर हास्दै बस्थ्यो होला । त्यो बेला मैले बेलायतमा मैले काम गर्ने हस्पिटलको बिमारी बृद्द बृदाहरुलाई बेस्सरी सम्झेँ, उनीहरु बिहान सबेरै दाँत ब्रस गर्नुस प्लिज ? भनि ब्रस दियो भने, आफ्नो डर लाग्दो बनावटी दाँत खप्लक्क फ़ुकालेर दिन्छन् । सुरुसुरुमा घिन लागेर कतिदिन भोकै बसेकोछु । दाँत लगाउदाको सुन्दर रुप दाँत फुकाल्दा अचेल सेल्फी खिच्न तयारी पारेको थुतुनो झैँ कुरुप देखेर हामी कति हाँस्थ्यौ । उहाको अनुहर भरिका ति जुन घाम जस्ता उज्याला जवानीहरु अचेल गोधूली साँझको डुब्न लागेको घाम जस्तै भएछ । निधार र गालाका धर्साहरु मै अस्ताई गएछ जवानी, बुढेसकालको छालाले आँखिभौ छेउको डिल सोहोरी झारेर आँखै छोप्न लागेछ । निकै बेर अल्मलिएछु बडा बाऊको अनुहारमा जवानी खोज्दा खोज्दै पछाडिबाट बुहारीले चिया पिउनु भित्र आउनुस न दिदि भन्दा मात्र टुट्यो मेरो तन्द्रा । मलाई मेरो बडा बाऊ देखेर मेरो गाउ र बाल्यकाल याद आयो । जुन बेला तुम्बा (बडा ) भर्खरको हुनु हुन्थ्यो अरु दाजु भाई कोहि लाहुरे कोहि स्कुले उहा मात्र गाँउको भाषामा भन्नु पर्दा चाहुरे ( सिभिल ) बार्है माष घरै हुने इमानी छोरा, हरेक चैत्रमा मकै छर्न वहाँ हलो जोत्नु हुन्थ्यो म सानी फुच्ची माटोको डल्लामा ठोकिएर लड्दै लड्दै मकै बिउ झोला भरि बोकेर सियो हाल्दै दगुर्थें । आमा र बडी आमा मिलेर मकैको बिऊ मुखमा हालेर एउटा एउटा खनेको ठाउतिर फुत्त फुत्त थुकी झार्दै छेऊकुना कोदालोले खन्नु हुन्थ्यो । त्यो बेला गाउँमा जसको बुहारी कोदाली खन्न बलियो र कामकारी हुन्थे तिनैको गुनगानमा भाका हालेर सासुआमाहरु गित गाउँथे । आहा….कति रमाइला थिए ति दिनहरु । अचेल तुम्बाको जेठा छोरा कन्चन भाईको छोरी त्यो बेलाको म जस्ती दुरुस्तै भएकी रहिछे ! मलाई देखाएर बुहारीले, फुफु हो सेवारो गर भन्दा खम्बामा झुन्डिएर औला टोक्दै लुक्दा झन् आफ्नो छाँया उसको अनुहारमा देखें …एकछिन सम्म उसैलाई हेरेर आफ्नो बाल्यकाल टाढैबाट नियालिरहें । घरमा तुम्मा बितेपछि ३ भाई भाईहरु सब विदेश लागेछन् घरमा बडा (तुम्बा) बुहारी अनि सानी नानी मात्र रहेछन् । (तुम्बा ) बडा र बुहारीले आज बस्नुस भनेर अनेक बिन्ती गर्दा पनि, एकछिन बसेर खाजा खाइवरि जहाँ बाट हामी आएका थियौं त्यै बाटै बाटो बगानका चियाका बुट्यान र रातमा उड्ने जुनकिरिहरुसंग लुकामारी खेल्दै फर्कियौं । घर पुग्दा खाना तयारी थियो खाएर एकछिन सदाझै टिभी हेर्दै गफ्फ गर्ने क्रम चल्यो भोलिपल्ट एउटा कार्यक्रमको निम्त्तो दमकमा थियो । सबेरै उठ्न गार्हो होला कि ? भनेर आमा बाबालाई बडाले भने जस्तो ( मिक्फूला ) को भाषा अंग्रेजीमा गुड नाईट भनेर ओछ्यान पसें ।
जानू काम्बाङ् लिङ्ग्देन